Suudaan Oo Taariikh Cusub Dhigtay Iyo Golaha Milatariga Iyo Shacabka Oo Qalinka Ku Duugan Heshiis Cusub - Borama News Network boramanews.com
Suudaan Oo Taariikh Cusub Dhigtay Iyo Golaha Milatariga Iyo Shacabka Oo Qalinka Ku Duugan Heshiis Cusub
Waxaa maanta la saxeexay heshiis dalka Suudaan u furaya taariikh cusub oo shacabka dalka iyo ciidamada xukunka hayaaba soo dhaweeyeen, sideed bilood oo kacdoon iyo mudahaarado socdeen ka dib.
Waxaa la qaybsaday xukunkii oo milatarigii iyo rayidkii qayb sadeen, inta doorashooyin xisbiyo badan markii ugu horaysay ka qayb qaadanayaan tan iyo 1986dii, oo ahayd markii Suudaan doorashooyin xaqiiq ahi ka dhaceen, xilligaas oo Saadiq Almahdi ku guulaystay.
Kulankii heshiiskan lagu saxeexayey waxaa aad uga soo qayb galay Madaxda dalalka Afrikaanka ah ee Suudaan ku hareeraysan, waxaanse ka soo qayb galin Carabta waliba kuwii lagu tirinayey in ay gacan saar la leeyihiin golaha milatariga ee hadda awooda lala qaybsaday. Dalalkaas waxaa ka mid ah Sucuudiga, Masar, iyo Imaaraadka, waxayna u soo direen raysal wasaare iyo wasiirada arrimaha dibadda, Turkiga ayaa isaguna wasiiirkiisa arimaha dibada u soo diray.
Waxaana la tilmaamay dalalka Sucuudiga, Imaaraadka, iyo Masar in ay dhibsadeen heshiiska awooda hadda lagula qaybsaday ciidamada, iyo doorashada dhici doonta cida ku soo bixi doonta, waxayna rabeen sida hoggaamiyaha Masar ee Siisii in ay xukunka iska haystaan milatarigu, sababtoo ah aad ayey u dhibsadaan dalalkaasi kacdoon shacab oo guulaysta oo doorashooyin ka hirgalaan, isla markaasina dalkaasi dal carbeed yahay kuna dhaw yahay.
Waxaa kale oo xayiraadii laga qaaday tvga Aljazeera oo muddooyinkii ugu danbeeyey dalka Suudaan laga mamnuucay.
Suudaan waxaa xilka raysal wasaaraha qaban doona nin aqoonyahan ah oo dhaqaalaha ku xeel dheer dhinacyada Suudaan isku hayaana soo dhaweeyeen.
Waxaa taariikhda Raysal wasaaraha cusub wax inooga tilmaamaya Axmed Macallin Siciid
“Dr Axmed Cabdallah Xamduuk waxaa uu noqdey Raysal wasaaraha soo dhisaya xukuumadda cusub, oo ku meel gaar ah, muddo ba waxaa la naawilayay in xilkaa loomagacaabo, wuxuuna ka socdaa dhanka mucaaradka isbedeldoonka ah.
Shaqadiisa iyo waayo aragnimaddiisu waxay ubadnayd midowga afrika, waa khabiir cilmiga dhaqaalaha meel sare ka gaaray.
Dr Xamduuk wuxuu soo qabtay xilal badan sannadadii illaa sideetamaadkii. Bangiga Horumarinta Afrika wuxuu umagacaabay 2001 madaxa dalka Ivory Coast, Sidoo kale wuxuu 2016 noqdey madaxa bangiga horrumarinta Afrika ee dalka Guinea-Bissau.
Sanadkii ina dhaafay ee 2018 madaxweynihii Suudaan kolkii uu gabi dhacleynta kujiray wuxuu umagacaabay wasiirka Maaliyada balse xilkaas wuu ka cudurdaartay inuu qabto isaga arkayay inuusan ku habbooneyn qabashadiisa, warqadd uu udiray Al bashiir wuxuu ku sheegey inuu booskaas hadda qaban karin ayna jiraan rag uga muhiimsan qabashaddiisa.
Falkan uu smaeeyey sumcad weyn buu uga heley shacabka Suudaan taasoo kor uqaadey jacayl ay uqabaan dadkiisu waana lagu sababayn karaa magacaabidda xilkan inay kutimid diididdiisii wasiirnimo
Faysal Cali Waraabe Oo Xujaydii Muuse Biixi Ka Mid Yahay Ku Hor Sugaya Kacbada
XOGTA-DAHSOON Dhacdooyinka Muranka Dhaliyay Ee Cidhifka Waqooyi Ee Dunida Ka Dhacaya Iyo..
Xagto Hadsoon: Israaiil Oo Kala Qaybsatay Dalalka Qaarada Africa Iyo Dhaca Xoogan Oo Ay Ku Hayso Khayraadka Dalakaasi
Madaxwayne Trump Oo Baajiyay Kulan Uu La Qaadan Rabay Ra’iisal Wasaaraha dalka Denmark